बलेवामा आखा शिविर, ६५७ को उपचार::Online News Portal from State No. 4
बलेवामा आखा शिविर, ६५७ को उपचार
३८ जनाको अप्रेसन र १३१ जनालाई चस्मा दिईयो
बागलुङ, १२ बैशाख – दुरदराजमा आँखाको उपचारबाट बञ्चित भएकाहरुलाई यहाँका केही संस्थाले संयुक्तरुपमा शिविर सञ्चालन गरेर सेवा दिएका छन् । बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थान वडा कार्यालय, नारायणस्थान सामाजिक सेवा प्रतिष्ठान र नारायणस्थान स्वास्थ्य चौकीले आँखाका बिरामीहरुको हितलाई मध्येनजर गर्दै शिविर सञ्चालन गरेका हुन् ।
तीन दिने निःशुल्क आँखा शिविरबाट ६ सय ५७ जनाले लाभ लिएका छन् । बिरामी मध्ये ३८ जना मोतिया बिन्दुका बिरामीको अप्रेशन गरिएको आयोजक संस्था नारायणस्थान सामाजिक सेवा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भरत पौडेलले जानकारी दिए । १ सय ३१ जनालाई चस्म लगाउनु पर्ने भएको छ । अदूर दृष्टि समस्या भएका कारण उनीहरुलाई चस्मा आवश्यक रहेको चिकित्सकहरुले बताए वपछि निशुल्क चस्मा वितरण गरीएको पौडेलले बताए । त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पताल काठमाण्डौले शिविरमा प्रबिधिक सहयोग गरेको थियो भने सहयोगी हातहरु नेपाल पोखराले शिविरको संयोजन गरेको थियो ।
शल्यक्रियाको नेतृत्व नेपाल आँखा अस्पतालका वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डा.इन्दुप्रसाद ढुङ्गेल र डा.सुजल श्रेष्ठले गरेका थिए भने प्राविधिक संयोजन नेपाल आँखा अस्पतालका कार्यक्रम संयोजक कल्याण ढुङ्गानाले गरेका थिए । शिविरबाट बिषेश गरी जेष्ठ नागरिकहरुले सेवा लिएको डा. कल्याण श्रेष्ठले जानकारी दिए । आँखा जोगाउन वडा कार्यालय र सामाजिक संघ संस्थाहरुले चलाएको शिविर प्रभावकारी भएको भन्दै श्रेष्ठले प्रशंसा गरे ।